GvSIG: Dareenka koowaad - Geofumadas
GvSIG: Dareenka koowaad
Isla markiiba waxaan ahay "xiran"si aad u gasho GvSIG, halkan waa aragtidii ugu horeysay.
Sidii aan daabacay bogagga buugga 371, waxaan abuuray aragti ah in qalabkan loo sameeyey dadka AutoCAD iyo isticmaaleyaasha ArcView. Tilmaameedka ArcView ayaa igu sugayey si sahlan "aragtida, miiska, map"laakiin AutoCAD xitaa xitaa ma xirna ... ka bilow magac iyo magac fogeynaya adigoo isticmaalaya astaanta qaabka waxaynu bartay iyada oo daabacadaha R12 iyo inkasta oo ay yihiin kuwo loo arko in ay yihiin kuwo aan run ahayn, waxay u shaqeeyaan ujeedooyin baaritaan. Dabcan, kartida dhismaha waa mid aad u yar laakiin waxaan qabaa inay ku dhow yihiin ku filan.
Tani waa in ay bartaan Manifold, iyada oo aan la raacin habka aan wanaagsaneyn ee "aan dooneynin in uu u ekaado sida ArcView" oo aan ka xuneyn maareynta qaabka hoose iyo dhinaca midigta midigta; Ugu danbeyn waxa ay ku xaddidan tahay fikradda barbaarinta ee loo yaqaan "barashada urur" ... laakiin ha u sheegin in jawaabtooda ay isku mid tahay:
"... Naqshadeynta qaab-dhismeed ee ay adeegsadaan qalabyada qaar waa kuwo aan waxba ..."
MicroStation ayaa hore u hiwaayad this soo gaadhsiisay inuusan dooneynin inuu u eg AutoCAD gees u tagay, halka dayactirka ay style u gaar ah wax ka qaldan samaynta gudban sida ay sameeyaan dadka isticmaala Windows. Inkasta oo inta badan waa in uu dar Magac-badan oo wax ku ool ah waayo galaya tilmaamaha iyo masaafo si style AutoCAD in aad keyin ... si ay tusaale ka hor.
Rakibidda gaabis ah
Dhab ahaantii rakibidda waa wax la yiraahdo, wax aan shuruud lahayn ... isagoo ku saabsan Java su'aasha keliya ayaa ah haddii aad rabto inaad ku rakibto mishiinka farsamada ee haboon si loo hanto.
Haa, waxay qaadataa waqtigeeda, laakiin aan lahayn caqabado. Marka la rakibay waxay diyaar u tahay isticmaalka ... su'aasha wanaagsan, miyaa la rakibi karaa iyadoon internetka laheyn JVM?
Inkastoo aysan ahayn qaabka aan jeclaan lahaa, taas oo ah a buug degdeg ah waxay sameeyaan labada cutub ee ugu horreeya iyo ka dibna kuwa kale si ay u balaariyaan waxqabadka ... dardargelinta buuga iyo gaar ahaan Isbaanishku maaha mid xun.
Markii la weydiiyay sababta aan u sameeyey buug rasmi ah kala cayncayn ah ayaa sheegay in caawimada online ahaa habka ugu fiican in ay sii oo dhan isbedelka, halka uu ka fogaaday inay kordhiyaan $ 25 per liisanka on buug daabacan sida uu soo gaaray boostada durba dhacsan ... iyo sidoo kale, oo iyaga dibadda u ah ee ku xiran qaadan ... waxaa xun ma aha kuwo madax adag laakiin J & # $$% lin haddii aan taabto qof walba geli boggaan in lagu sameeyo buugaagta qalab kasta oo la fulinayo.
Lahaanshaha qalab wanaagsan waa heer sare, kala cayncayn ah waa, laakiin taageerada ay godka badh laga qaaday timaha ... in ay jiraan forums. Waxaan rajeynayaa in ay geofumados codsigan si aan u bogi xusuusnow in aan weli waa "macaamiisha" iyo "macaamiisha kuwaas oo lacag uu liisanka," ma kuu sheegi karaan ironies sida "fadlan ha ku dhumin in aad taageero calaamadihii ... ma waxaan filaynaa in aan halkan la iman su'aalaha ku jira readme ah ... "ah, waxaan halmaamay aan ku hadlin Isbaanish si aan faa'iido dharkayga yar ayaaa dhagaystayaal la xusho sida.
Marka la eego, waxaan qabaa in Manifold uu yahay mid ka mid ah qalabka ugu fiican ee ganacsiga GIS, marka la qiimeeyo cajiib ah ... haddii aan ahaa Oracle waan iibsan lahaa.
... oo waxaan jeclahay gvSIG, waxaan arki doonaa inta ay jacaylku socdo.
Post Previous«Previous Barnaamijka GvSIG - aynu soo deyno ...
Post Next GvSIG vrs. Manifold, qaababka wax-soo-saarkaNext »
Hal Jawaab u Jawaab "GvSIG: Dareenka koowaad"
kala duwan isagu wuxuu leeyahay:
Su'aasha miyaad rakibi kartaa adiga oo aan internetka laheyn JVM?
Pureba si aad u soo dejiso qaybta la qaadan karo
Waxaadna GvSIG ku qaadan kartaa keykain meelkasta oo aanad ka walaacsaneyn JVM ama Nidaamyada Hawlaha. Macluumaad intaas ka badan